Kaadị ịde blọgụ m erutela! | Martech Zone
Na Tọzdee, Septemba 18, 2007 Fraịde, Jenụwarị 6, 2017 Douglas Karr
Ozugbo m mechara kwuo okwu na nzukọ, a na-ajụkarị m maka kaadị azụmaahịa site n'aka mmadụ ole na ole. Kaadị azụmahịa? Maka onye na-ede blọgụ? Na nzukọ 3 na-abịa na ọnwa ole na ole sochirinụ, ekpebiri m ịmaba ma nweta ụfọdụ kaadị azụmahịa! Amaghị m ego ole m nwere ike ịla n'iyi mgbe mmadụ pụọ ma echetaghị onye m bụ.
Kaadị ndị ahụ rutere taa ma echere m na ha dị oke mma:
Emere kaadị ndị ahụ VistaPrint, nke a bụ oge nke 5th ma ọ bụ 6th mụ na ha na-azụkọ ahịa. Ha na-enye kaadị azụmaahịa dị larịị nke nwere ụfọdụ ụdị aghụghọ - ma ọ bụ na ị ga-apụ apụ. M họọrọ chepụta m n'elu n'elu a ndabere image ha nwere na ngwaahịa. Enwetara m ihu na-egbu maramara na azụ ojii na ọcha. Otu formatting n'ọnụ… iji ha online nchịkọta akụkọ, ị nwere ike tinye otu oyi akwa n'elu ọzọ. Na m blog aha na URL, M na-eji na-acha ọcha n'elu nwa font nke mere na ọ pụtara ìhè na-acha anụnụ anụnụ ndabere.
Site na mbupu, ọ gbara m ihe dị ka $ 50 maka kaadị 500. Echeghị m na nke ahụ jọgburu onwe ya ma ọlị! Ha ga-akwụ onye mbụ chetara m ụgwọ maka onwe ya. 🙂
Enwere m kaadị ụfọdụ maka papa m ma ha egbupụ okwu na ha. Oge adịghị anya akpọtụrụ m VistaPrint, ha emeziri ihe ohuru ha doziri nye papa m. Ọrụ ha masịrị m nke ukwuu.
Gbalia ijide m na Azụmaahịa Prọfesọ B2B na-abịa na Chicago! Aga m anọ na nchịkọta Blogging. Kwụsị ma m ga-enye gị kaadị m.
Tags: ịde blọgụkaadị azụmahịakaadịdouglas karrBlog Ahịa Blogblog teknụzụ ahịanlele anya
Ike gwụrụ m na FPAM
Septemba 18, 2007 na 11:45 ehihie
Sep 19, 2007 na 6: 44 AM
Sep 19, 2007 na 2: 14 AM
Julaị 31, 2008, elekere 2:25 nke ehihie